သူတို့ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကား | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » သူတို့ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကား
သူတို့ပြောတဲ့ အင်္ဂလိပ် စကား
Posted by ကူမားရ် on Oct 11, 2011 in Creative Writing, Literature/Books | 42 comments
အင်္ဂလိပ်စာကားးပြောတဲ့ အကြောင်း ပိုစ့်ဖတ် ရတော့ ကိုယ့်ထက်တော်ကြ တတ်ကြတဲ့ ရွာထဲကလူတွေကို အားကျမိတယ်
သူတို့လိုတတ်ချင်ပေမယ့် ဦးနှောက်က မသွားတော့ဘူး မစုပ်ယူနိုင်တော့ဘူး။
၀င်ဆွေးနွေးရလောက်အောင် လည်းမတတ်တော့ ကိုယ်လက်ရှိ နေ့ တဓူဝ ကြုံတွေ့နေရတဲ့
England ကလူတွေ ပြောနေကြတဲ့ အသုံး အနှုန်း လေသံလေးတွေ ကိုသာ မှတ်မိ သလောက် ပြန်ပြီးဖောက်သည် ချပါရစေ
England, Wales, Scotland နဲ့ Northern Iraland လေးခုပေါင်းမှ United Kingdom( UK)ဖြစ်တာ ဆိုတော့ အားလုံးက အင်္ဂလိပ် စကားပြောကြပေမယ့် လေသံမတူကြ ပါဘူး။
Scottish, Welsh, Irish and English ဘာသာတွေ သပ်သပ်စီ ရှိပါတယ်။
နေရာဒေ သ အလိုက် အင်္ဂလိပ် စကားကိုပဲ လေသံ ၀ဲပြီးပြောကြ ပေမယ့် England ဘက်မှာ လူဦးရေ ပိုများပြီး လူစုံတဲ့ အတွက်
ဒီမှာလည်း လေသံ အ၀ဲတွေ ပိုများပါတယ် .. မြို့ မတူတာနဲ့တင် အသံထွက် မတူတော့ပြန်ဘူး။
Liverpool, Birmingham, Manchester, Yorkshire စတဲ့ မြို့တွေ မှာ တစ်မြို့နဲ့ တစ်မြို့ ၀ဲတာ မတူသလို London မှာတင် တစ်မြို့ထဲ ကို Southerner , Eastender ဆိုပြီးလေသံကွဲပါတယ်..
ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ က အဆိုးဆုံးလို့ပြောရမလားပဲ..
အရင်က ကျောက်မီးသွေး မိုင်းတွေရှိတော့ ယူကေ တခွင်က လာပြီး မိုင်းတူးကြတယ်
နောက် မိုင်းတွေ ပိတ်သွားတော့ မူရင်းနေရပ် မပြန်ကြတော့ ပဲ ဒီတစ်ဝိုက် မှာ စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး လုပ်ပြီး ဆက်နေကြရင်း သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေ ကျန်ခဲ့ပြီး လအော့ လအယ်တွေ ဖြစ်ကုန်ရော…
Yorkshire ခရိုင်မှာတင် South, north, east and west လေးခုလေသံမတူဘူး။
စကားလုံးအသုံးတွေ ကလည်း အရမ်း ရှေး ကျပြီး ခရစ်ယာန် ကျမ်းစာ ထဲက အသုံး မျိုးတွေ သုံးတယ်..
How are you? လို့မပြောဘူး Thou alright? လို့ပြောတယ်
I hate you လို့မပြောပဲ Me hate thee လို့ပြောတယ်။
Owner လို့မပြောပဲ landlord လို့ပြောတယ်
Pound လို့မပြောကြပဲ quid လို့ ပြောတယ်
I will come and see you tomorrow အစား I will call in tomorrow
Two weeks ကို forth night
၅ ကျပ်တန် ၁၀ တန်ကို fiver , tenner စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲကြတယ်
This man အစား This bloke
Nice boy အစား Nice lad
Our girl (our daughter ) အစား Our less
What are you looking for (what are you searching for) အစား What you are after လို့သုံးတယ်။
I am feeling unwell (or) I am ill, I am sick အစား I am poorly လို့ သုံးတယ်။
အသံထွက်တွေဆို တော်တော် ကြိုးစားနားထောင် ပါမှ နားလည်တယ်
တချို့ အသံထွက်တွေ ဆို အင်္ဂလိပ်မှ ဟုတ်ပါလေစ ဆိုပြီး ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်တယ်.
duck = ဒွခ်
school = စကောလ်
pork = ပွက်
boots = ဘွိတ်စ်
coat = ကွိတ်
but = ဘွတ် ( အင်္ဂလန်မှာ တစ်ကယ် ဘွတ်ပါတယ် မဘတ်ပါဘူး)
tonight is the night = တူနိ အက်စ် သ နိ
puma = ပြူးမား
Burma = ဗူးရ်မား
စသည်ဖြင့် ဘယ်လိုမှ နားမလည်အောင်နှိုင်အောင် ပြောကြတယ်..
Liverpool ဆိုရင် နီးနီးလေး မြို့ချင်းကပ်နေတာ ဒါပေမယ့် Liverpool သားတွေနဲ့စကားပြောရင် လှိုင်းစီးနေရသလိုပဲ။
ဝေ့လိုက် ၀ဲလိုက် တက်လိုက်မြင့်လိုက်နဲ့ သြော်ဇီ လေသံမျိုး ( ဖောရင်းကြီးတို့ ပြောနေတဲ့လေသံပေါ့)
ကျောင်းတက်တုန်းက အသံထွက်မှားရင် ရှက်စရာပါ ဆိုပြီးအတင်း အသံ ထွက်ခဲ့ရတဲ့ ဟာတွေ ဆို
There (သဲ) ကို သဲယား
Here (ဟီးရ်) ကို ဟီးယား
Where (၀ှဲ) ကို ၀ှဲယား
Again (အဂန်း) ကို အဂိန်း
Flour (ဖလော) ကို ဖလားဝါး
စတာတွေကို အားလုံး ငပိသံပဲထွက်ကြတယ် ။
အဲ ဒါပေမယ့် တီသံထွက်ဖို့ကြတော့ ပျင်းမှပျင်း
My daughter = မိုင်ဒေါ့အား
Computer = ကွန်ပြူအာ
Later = လိတ်အား
Bottle = ဘော့အယ်
Pattern = ပက်အန်
Isn’t it = အင့်အစ်
Western Park =၀က်စ်အန်းပါက်
စမ်းရွတ်ကြည့် ပါ ဘယ်လောက် အချောင်ခိုထားလဲ ဆိုတာ
တစ်ယောက်နဲ့တစ် ယောက် ၀င်တိုက်မိရင် sorry flower, sorry my love ဆို ပြီးယောင်္ကျားမိန်းမ အကုန်ပြောတယ်။
အဲဒါအကျင့်ပါပြီး စင်္ကာပူ မှာ တုန်းက တရုပ်မလေး တစ်ယောက်နဲ့ဝင်တိုက် မိတာ က်ို ဆောရီး မိုင်လဗ် လို့ ပြောမိလို့ ချာတိတ်မက မိုက်ကြည့် ကြည့်သွားတာခံလိုက်ရဘူးတယ်။
(မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများသည် အင်္ဂလိပ်စာကို ထမင်းစားရေသောက်လောက်တော့
သတိထားဘို့က အဲ့သည် ထမင်းစားရေသောက်တဲ့အဆင့်ကနေမကျော်တာကိုပါ
နောက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားတွဟာ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်လုပ်ဘိ်ု့
ဒီစကားကို ထမင်းစားရေသောက်တော့ အသည်းအသန်သင်ကြရပါတယ်
ဆိုတာ အတော် များများ ဟုတ်ပါတယ် (ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီ အစားထဲက ပါ)
ဆက်ပြီးမလေ့လာကြတော့ တာ ပျင်းသွားကြတာ လုပ်စားလို့ ရရင်တော်ပြီ ဆိုပြီးနေ လိုက်ကြတာကြောင့် ပါ တစ်ကယ်တော်ပြီးတတ်တဲ့သူတွေလည်း အများကြီးတွေ့ ဘူးပါတယ် ရှိပါတယ်။
အမှန်က အင်္ဂလိပ်စကား (Qeeen’s English ) ကို အမှန်ဆုံး အနီးစပ် ဆုံး တူအောင် ပြောနိုင်တာ အသံထွက် နိုင်တာ အာရှမှာ မြန်မာ ပဲရှိတာပါ။
(အင်ဒီးယန်းတွေ ကအပြောနိုင်ဆုံးပေမယ့် သူတို့နေးတစ် လေသံကို မဖျောကိနိုင်ပါဘူး)
England နဲ့ နီးနေတဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင် ငံက European တွေ တောင် မြန်မာ လောက် မှန်အောင် အသံထွက်မကောင်းကြပါဘူး။
မြန်မာက ရ အောင် ထွက်နိုင်တယ် အတုခိုးလွယ် သင်ရင် အတတ်လွယ်တဲ့ လူးမျိုးပါ။
ကျွန်တော်တို့ အမှန် တစ်ကယ် လိုအပ်နေ တာ က တတ်သလောက်နဲ့ ဘ၀င်မမြင့် ရှိသလောက်နဲ့မတင်းတိမ် သိသလောက်နဲ့ ရပ်မနေ မှတ်မိသလောက်နဲ့ ကျေနပ်မနေပဲ ဒီ့ထက် ထို့ထက် ပိုပြီး လေ့လာ ဖတ်မှတ် ကြိူးစားဖို့ သာ လို အပ်ပါ ကြောင်း…….
စာရှည်ရှည် တစ်ခါမှ ဒီလောက် မရေးဘူး တော့ မောပြီး အင်နာဂျီ ကုန်သွားပြီ….အဲဒီ အတွက်
ရေ ချမ်းချမ်းလေး တစ်ခွက်နှင့် ဘဲဥ မှည့်မှည့် တပြူးလောက် ၀မ်းတွင်းသို့ သွင်းပါရစေ
ကျေးဇူးပြု၍ လိမ္မော်သီး ဖွင့် ပေးနိုင်ကြပါ မည်လား
သွင်းထားသော ဘောင်းဘီတစ်တွဲ ကို ဖယ်ထုတ် ပြီး ပုဆိုးတစ် လုံးရလျှင် ထည့်ပါမည်
အကယ်၍ ကြင်နာစွာဖြင့် သင်ဖျာခင်းပေးပါလျင် ကျွန်ုပ် ဖင်ထား ချင်ပါသည်။
သစ်ပင်ပေါ်တွင် ငှက် လင်မယား ထိုင်နေကြသည် ကောင်းကင်တွင် ဖုန်မရှိပါ
ပျံလွှားငှက် များ ကို ကြည့် ပါဟု အင်္ဂလိပ်လို ပြောမိသည် တွင် ဘာကြောင့်မှန်းမသိရပါပဲ ဆီသည် များ ဒရော သော ပါး ထွက်ပြေးကြသည်။ (မှတ်မိသလောက် မြန်မာလို ပြောကြည့်တာ)
မှန်လိုက်လေ အဘဆွေ ရယ်
မောင်ပေ တစ်ယောက်ဆိုလျှင် လဲ
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဟုတ်လှပြီ မှတ်နေခဲ့တာ
အဘဆွေ ပြောမှ ပဲ
ကျမရွာထဲရောက်မှ အဘဆွေရေးတဲ့စာကို မှတ်မှတ်ရရ ဒီတခါပဲတွေ့ဖူးတယ်..
အဘဆွေပြောတာ အမှန်တွေပါ.. ကျမတို့တွေလည်း ဒီထက်မက ပိုလေ့လာရအုန်းမှာပါ.. အများကြီးလည်းကြိုးစားရအုန်းမှာပါ..
သီတင်းကျွတ်အခါသမယမှာ လူကြီးသူမတယောက်ဆီက ဒီလို အဆုံးအမမျိုးခံယူရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်..
အဘဆွေကိုလည်း ဒီကနေပဲ ရွာရဲ့ ရပ်မိရပ်ဖတယောက်အနေနဲ့ ဂါရ၀ပြုကန်တော့လိုက်တယ်နော်..
ကျွန်တော်က ABCD လေးလုံးပဲတတ်ပါတယ်..။ ဒါကြောင့် အားလုံးကိုကိုယ့်ထက်တတ်တဲ့သူတွေဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်.. ။ ဒီထက်ပိုတတ်ဖို့ မလိုလို့လားမသိဘူး..။ ဘယ်သူက ဘယ်လောက်သင်ပေးပေး အချိန်တန် ဒုံရင်း ဒုံရင်းပဲ ပြန်ပြန်ရောက်သွားတယ်..။ အဲဒိတော့ ကိုယ်ဖတ်ချင်တာကို စာရိုက်ပြိး ရွာထဲ ဘာသာပြန်ခိုင်းရရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားမိသေးတယ်..။ ဆမ္မားဆက်မွန်ရဲ့ အက်ဆေးစာအုပ်သေးသေးလေး ဖတ်နေတာ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်ရှိပြီ..။ ခုထိ တစ်ပုဒ်မပြီးသေးဘူး …။
တခုတ် တရ ဖတ်ပေးတဲ့ မောင်ပေ ကို ကျူးဇေး ပါ တော်။
ဂါရ၀ပြုတဲ့ pooch ရေ သာဓုသုံးကြိမ် ခေါ် ပြီး မေတ္တာ ကိုခံယူပါတယ်
သမီးလည်း ကျမ္မာ ချမ်းသာပါစေ ရန် ဆုတောင်း လိုက်ပါတယ် အဘပို့သသောသန့်ရှင်း သည့် မေတ္တာကို လည်းခံယူပါ။
ကို နေ ရေ ကျွန်တော် လည်း အဲ့ဒီလို ဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက် လုပ်လုပ် ရှေ့ဆက်မတက်တော့ ဘူး။
ကိုနေ ကမှ ဆမ်းမားဆက်မွန် ဖတ် ဖူးသေးတယ် ကျွန်တော် ကိုင်တောင် မကြည့် ဖူးဘူး အင်္ဂလိပ် ၀တ္တု ကို ပယ်ပယ် နယ်နယ် ဖတ်ဖူးတာဆိုလို့ Henry Carrier ရဲ့ Papillon ဆိုတာ တစ်အုပ်ပဲ ရှိတယ်။
အမတ်ကြီး ရေ မေ့တော့ မေ့တာပေါ့ ဒါပေမယ့် မေ့တာ ပေါ့ သို့သော် ဆက်သွားနေရမှာပဲ သွားပါ
မေ့သွားရင် အစက ပြန်စ။ အရေးကြီးတာ က ပေါက်အောင် ပြော နားလည် အောင် ရှင်းနိုင်ရင် ရပြီ ပေါ့။
ကျွန်တော် လည်း English စာ မကောင်းပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကြားဘူးတာလေးတစ်ခုတော့ ဝင်ပြောပါရစေ။
English စာ စဖတ်ရင် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားမယ့် Subject ကနေစဖတ်ရတယ်။
နို့မို့ဆို English စာဖတ်တာ ပျင်းသွားလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ဆို စစချင်းမှာ Play Boy, Penthouse ကနေစဖတ်တာပဲ။
Story လေးတွေဆိုတာ အရမ်းကောင်းပေါ့။
( PS ; အခုထိလဲ အဲဒီက မတက်တော့ဘူး )
ကိုဖောရင်းကြီးရေ ဒွတ်ခပါပဲဗျာ အဲဒါ စီးကရက်တွေ လေ မကောင်းတာတွေ ပေါ်ကုန်တော့မယ်…..
ဖောရင်းကြီးပြောတာ အမှန်ပါပဲ…..စာရေးဆရာ ကြီးမင်းသိင်္ခ ကလည်း အဲဒီလိုပြောဘူးပါတယ်။
” English စာ စဖတ်ရင် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားမယ့် Subject ကနေစဖတ်ရတယ်။
နို့မို့ဆို English စာဖတ်တာ ပျင်းသွားလိမ့်မယ်။”
ကျွန်တော် လည်း Harold Robins တို့ Barnes and mills တို့ကနေ စဖတ်တာ ဟီးဟီး..
နောက် မှ Jack Higgins, James Hadley chase တို့ပြောင်းဖတ် ပြီး စာဖတ်တိုး သွားတယ်။
သူတို့ ၀တ္တု မြန်မာ ပြန်တွေ မောင်ထွန်းသူ ရေး ထားတာရှိတယ်။ နှိုက်နှိုက် ချွတ်ချွတ်တွေ ဆို
ဘာရေးထား လဲဆိုတာ သေချာသိချင်တော့ dictionary လှန်ရရော အဲဒီတော့ စာလုံး အသစ်တိုးလာတယ် အဲဒီ စာလုံးတွေ ပဲ နောက် အခန်းတွေ မှာ ခပ်ဆင်ဆင် လေးတွေပြန်ပါ လာတော့ မှတ်မိ သွားတယ် နောက် ဒါမျိုး တစ်အုပ် လည်း တွေ့ရော သွက်သွက်ကြီး ဖတ်လို့ရသွားပြီ။
ဝယ်ယူ လေ့လာ လို့ ရပေသကိုး
Internet ကနေ အလွယ်တကူ Download လုပ်လို့ရတယ် မဟုတ်လား
အဘဆွေရေ(သူများခေါ်လို့လိုက်ခေါ်တာ) ကျွန်တော်ငယ်ငယ်က မှတ်ထားတဲ့မှတ်စုလေးတွေ့
လို့ကူးရေးနေတာ၊အငယ်က ရေးထားတာစာလုံးပေါင်းအမှားတွေအများကြီးဗျ၊ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ
မျဉ်းနီတားထားတာတွေ့မှ အဘိဓန်လှန်ပြီးပြင်နေရတယ်။ အမှားတွေကိုပြင်ပေးပါ၊ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့
ကျွန်တော်က အင်္ဂလိပ် ကိုသိပ်မကျွမ်းကျင်ပါဘူး။
ကိုခိုင်ရေ (ခေါ်ရတာ အားမရလိုက်တာ သဂျီးဆိုတာ ပို အာတွေ့တယ် ခိုင်ချင်းတူနေလို့)
ကျွန်တော် နေတာ က
တောင်ပိုင်း ယော့က်ရှိုင်းယား မှာပါ..မြို့က ဘန်စလီ လို့ခေါ်ပါတယ်..မြို့ဆိုပေမယ့်ရွာသာသာ ပါ..
အနားတစ်ဝိုက် မှာလည်း တောင်ကုန်းတွေ ချိုင့်ဝှမ်းတွေ တောင်ကြားတွေ ကြားထဲမှာ မြို့သေးသေးလေးတွေ အများကြီး ကို ပွနေ အောင် တည်ထားနေထိုင်ကြတယ်။
wuthering Height ရေးတဲ့ Emile Bronte တို့ ညီအစ်မတွေ နေတဲ့ နေရာန Bronte’s country နဲ့ ၁၅ မိနစ်လောက်ပဲဝေးတယ်။
အရင် ပထမကမ္ဘာ စစ်အပြီး အဂ်လန် ပြန်ပြီးထူထောင် တဲ့ အချိန် မှာ ကျောက်မီးသွေး အထွက်ဆုံးနေရာ ပေါ့ နောက်တော့ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ကြပြီး လယ်တွေ ယာတွေနဲ့ အပြည့် ဖြစ်သွားတယ်။ လူစုံနေ ထိုင်ကြတယ် ဘာသာစကား မျိုးစုံ ပြောတယ် ဂျစ်ပဆီ နဲ့ ပိုလန်တွေ အယ်လ် ဘေးနီးယန်းတွေ လဲရှိတယ်။ ရှေးကျပြီး ရိုးသားတောဆန်တဲ့ နေရာလေးပါ။
အင်္ဂလန်က..မြန်မာပြည်၇ဲ့ ၅ပုံတပုံလောက်အရွယ်နဲ့.. လူဦးရေကျ..သိပ်မကွာဖူးလို့ တွေ့ရတယ်..။
အင်္ဂလိပ်တွေကိုလည်း.. အင်မတန်ဟိတ်ဟန်များပြီး.. လူမျိုးခွဲခြားလို့.. တခြားသူတွေ အ၀င်မခံတဲ့..အနေနဲ့..ပုံဖေါ်ထားတာ…။
အဘဆွေစာကိုဖတ်ကြည့်တော့.. ဖယ်ရီတေးလ်တွေထဲက.. သဘာဝအလှပြန်မြင်ယောင်မိသလိုပဲ..။ ငြိမ်းချမ်းစွာအတူနေကြတာကို.. မြင်ရသလိုပဲ..။
်အဘဆွေရေ- တစ်ပုဒ်ဆို တစ်ပုဒ် ဆိုသလောက် ပေါက်ပါပေတယ်။
(အယ်ဒီတာ့ ရွေးစာအဖြစ် stick လုပ်ထားတာတွေ့လို့။)
အဘဆွေကွ သူများလို မိုးပေါ်ထောင်မပစ်ဘူး၊ ပစ်ရင် တည့်တည့်မှန်အောင်ပစ်တယ်။
ငယ်ငယ်က put ပွတ် but ဘွတ် cut ကွတ် လို့နောက်ခဲ့တာတွေ ဒီလိုဆို နောက်မိတာမှားပေါ့လို့ တောင်းပန်ရတော့မှာဘဲ၊
၀ှဲယား သဲယား အဲယား တွေလည်း ကြိုးစားပန်းစားပြင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်၊
ဒါကိုကြည့်ရင် ဘယ်နေရာမှာမှ အမှားလို့ တစ်ဖက်သတ်ပြောမရဘူးလို့ သင်ခန်းစာယူမိပါတယ်၊
ကျွန်မတို့က အသံထွက်မှန်မှ ပြောမယ်စိတ်ကူးပြီး အဲဒီအသံထွက်ကိုဂရုစိုက်နေရတာနဲ့တင် စကားကပြောမထွက်တော့ဘူး၊
ဒါကြောင့်ကျောင်းတုံးကဆရာဆူသလိုဘဲ ခွေးအကြီးလှည်းကျိုးနင်းတာမှ အိုင်အိုင်နဲ့ ထွက်သေးတယ်၊
နင်တို့က လှည်းကျိုးကြီး ခွေးအနင်းတာ တဲ့၊ဘာသံမှမထွက်လို့လေ။
အဘဆွေ ရေ ဥာဏ်အလင်းရောင်ပေးတဲ့အတွက် သိုင့်ခရုပါ။
အသံထွက် မပီလို့ အားမငယ်တော့ဘူး အဘဆွေ…….
အမောပြေ မုန့်ဟင်းခါး တစ်ခွက်လောက် ယူသောက်လ …
ကျနော်ကို စာလုံးပေါင်းပြင်ပေးတာ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါ၏ အဲဒီနေ့က လူကအလုပ်ကလဲပင်ပန်:, post ကလဲတင်ချင်နဲ့ ဆရာဆွေကပြော သူကြီးက ပြင်ပေးလို့ပါ ကျေးဇူးကဘာ ပါဗျာ အစဉ်လေးစားလျှက်
ကြောင်လတ် ..ဘလည်းလိပ်တာတွေ ကိတ်တာတွေ သိပ် မသိပါဘူးကွယ်..
ချစ်မောင်ရေ (ခေါ်ရတာ ရင်ထဲ ဘယ်လို ဖြစ်မှန်းမသိဘူး ဖိုးသိုးဖတ်သပ်နဲ့)
၀ိုင်းအားပေးကြလို့ အားတက်သွားပြီး နောက် ဆက်ရေးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ် slung တွေ ရေးပါဦးမယ်နော်။
မြှောက်ပေးတဲ့မမ ကို သိုင်းအကြီးကြီး ကျူးပါတယ် (မုန့်ကြွေးပါမယ်)
ကိုကြောင် က လေ ကျွန်တော့်ဆို အမြဲ အချွန်နဲ့ မတယ် ၀ိုင်းလုပ်ရင်ခံရအောင် ပြောပေးတယ် ပုဇွန်ခြောက်တွေရထားတာ ပို့ပေးမလို့ဟာ ခု ပို့တော့ဘူး ချိတ်နာတွားဘီ (ဒိုင်းညှောင့်)
ပွတ်ပါ ဘွတ်ပါ ကွတ်ပါ
(ပွတ်သာပွတ် ဘွတ်သာဘွတ် ကွတ်သာကွတ်)
ခြေနှစ်ခြောင်း ကား လက်ကိုတောင်ရမ်းမြောက်ရမ်း လုပ် ကိုယ် ကို ဘယ်ညာရိမ်း၍ ရပ် လေသံဖြင့်ခပ် သွက်သွက် ရွတ်ဆိုပါ..
အစဉ် – အောလ်ဝေစ့်
အမှောင် – ဒက်ခ (ဒါက အင်္ဂလိပ် ရပ်)
မပဒုမ္မာ ကမှတော်သေးတယ် ခွေးအ လှည်းနင်းတာ ကျွန်တော် ဆို အ အ အိပ်မက် မက်သလို ဘာပြန် ပြောရမှန်း မသိ ပဲ ခံခဲ့ရတာတွေ အများကြီးပါ အဓိက က ပြောဖို့သာ လိုရင်းပါနော်။
သဲယားအစ် ဘဲရီး မုန့် ဟင်းခါးစား တူမောရိုး ယူ ၀ယ် သွက်သွက် ချမ်းပီး တဲ့…
သည် စိမ်း မရမ်းပြား မကျီးဖျော်ရေ ဇောင်းလျားသီး အန် ချဉ်ရေဟင်း သောက် အောလ်ဆိုး ချမ်းပီး ဆိုပဲ….
တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင် ဘ ဒီနေ့ မုန့်ဟင်းခါးချက် တယ် ဆိုတော့ …
အိုင် အမ် ဂိုး ရင်းတူဘီ …သွပ်သွပ်သွပ်
ကျွန်တော့် ဘ၀မှာ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ သိနေပြီး မလုပ်ဖြစ်တဲ့ ကိစ္စ နံပတ် (၁) က
အင်္ဂလိပ်စာ ဖြစ်ပါတယ် ဆရာ akswe ခင်ဗျား။
ရွာထဲမှာတော့ Foreign Resident ရဲ့ ရေးပုံကလေးတွေကို လေ့လာပြီး
ဆရာမ TTNU ရဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို လေ့လာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာ့ပို့စ်တွေ စောင့်ဖတ်နေပါမယ်။ ကျေးဇူးပါ။
အခုမှပဲ ဖတ်ဖြစ်လို့ မန်းတာနောက်ကျသွားတယ် အဘဆွေ …
ကျွန်မလဲ အင်္ဂလိပ်စာကို ၁၀ တန်းအောင်ပြီးကထဲက ဆက်မလေ့လာတော့တာ ယနေ့အထိပဲ … အခုဆို တရုတ်စကားကို အင်္ဂလိပ်စကားထက် ပိုပြီးပြောတတ်သွားတယ် …
ကျွန်မရဲ့ ၁၀ တန်းအထိ အင်္ဂလိပ်စာက မညံ့ခဲ့ဘူး … ဂုဏ်ထူးတောင်ရခဲ့သေးတာဆိုတော့ (ကြုံတုန်းကြွားတာ) … ဆရာကောင်းကောင်းနဲ့သေချာသင်ခဲ့လို့ အသံထွက်လဲ မှန်ပါတယ် … ဒါပေမယ့် တရုတ်ပြည်ရောက်မှ ကျွန်မပရော်ဖက်ဆာက ကျွန်မပြောတာနားမလည်လို့တဲ့ … အင်္ဂလိပ်စာ ပြန်လေ့လာပါလို့ပြောလိုက်လို့ ငိုချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ် … ဒါပေမယ့် အင်္ဂလိပ်စာကို မလေ့လာတော့ဘဲ သူတို့နားလည်တဲ့ တရုတ်စာကိုပဲ လေ့လာဖြစ်သွားတယ် …
အခုကျတော့ တရုတ်စာက အသုံးမတည့်တော့ပဲ အင်္ဂလိပ်စာကို ပြန်သုံးနေရတော့ ဦးနှောက်တွေလဲ ချောင်ကုန်ပြီ …
” တရုတ်ပြည်ရောက်မှ ကျွန်မပရော်ဖက်ဆာက ကျွန်မပြောတာနားမလည်လို့တဲ့ … အင်္ဂလိပ်စာ ပြန်လေ့လာပါလို့ပြောလိုက်လို့ ငိုချင်စိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ် … ”
Ma Wei Wei,
မြန်မာတွေကို English အသံထွက်မှားအောင်လုပ်တဲ့အထဲမှာ မဂ္ဂဇင်း ဂျာနယ် လဲပါတယ်။
စာအုပ်ထဲမှာ ရေးလေ့ရှိတဲ့ “ကုမ္ပဏီ / ကုမ်ပဏီ” ဆိုတာကိုစွဲနေလို့၊
တကယ်က “ကမ်ပနီ” ကပိုနီးစပ်မယ်။
Wuthering Heights နဲ့ ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တာဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ကို ထပ်ခါထပ်ခါ ကြည့်ဖူးတယ် … အဘဆွေနေနေတဲ့ နေရာကို စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ကြည့်လို့ရတယ် … တော်တော်လှတဲ့ တောင်တန်းတွေ မြက်ခင်းတွေရှိမှာပေါ့နော် … သိပ်လှတဲ့ ဘိုမတွေလဲ ရှိမှာသေချာတယ် … အဘဆွေ မပြန်နိုင်ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား … ??
မဝေ ရေ …..
အင်္ဂလိပ်စာ ဂုဏ်ထူးတောင်ရခဲ့သေးတာဆိုတော့ အရမ်းတော်လို့ရတာ သေချာတယ်..
ကျွန်တော်က ဆရာကောင်းတွေ့ခဲ့ပေမယ့် မကြိုးစားခဲ့လို့ ညံ့တယ် အညံ့ဆုံးကတော့ ဂရမ်မာ ပဲ
ရွာထဲမှာ တီတီနု သင်ပေးတာတွေ လိုက် ပြီးသင်နေ တယ် သူ့လိုမျိုးတတ်ချင်တာ မတတ်ခဲ့ရဘူး
စကားပြောနဲ့ နားထောင် တာက က ပြောတတ်သူနဲ့အ နေများရင် တတ်လာတာပါ ဘဲ
မဝေ တို့လိုဥာဏ် ကောင်းတဲ့ သူတွေ လုပ် ချင် ရင် အလွယ်လေးရယ် အခြေခံကောင်းပြီးသားတွေ..
Wuthering Heights ကတော့ ဒီမှာလည်း ခုထိ တီဗွီမှာ ပြနေ တုန်းပဲ..
နေရာတွေကတော့ လှတယ် မဝေ ရေ တော်တော်လှတဲ့ တောင်တန်းတွေ မြက်ခင်းတွေ အပြင် ရေကန် အကြီးကြီးတွေ လေရဟတ်တွေ ရှေးဟောင်း ရဲတိုက်တွေ victorian ခေတ် ကက်သရီဒရွယ် တွေ အများကြီး ရှိတယ်.. တစ်ခုကောင်းတာ က သူတို့ က အလေးအမြတ်တားပြီး ထိမ်းသိမ်းကြတယ် စောင့်ရှောက်ကြတယ်
ဟောဒီ မြင်ကွင်းလေး ကို မျက်စိထဲ မြင်ကြည့် ပုံဖော်ကြည့် ပါနော်…..
ကွင်းပြင် စိမ်းစိမ်း နောက်ခံ အကျယ် ကြီး မှာ အခင်းလိုက် စိုက်ထားတဲ့ပန်း ခင်း အဖြူ အပြာ အနီ အ၀ါ ရောင်စုံတွေ ကို ထင်းရှူးတော အုပ် က ၀န်းရံပြီး စမ်းချောင်းလေးနဲ့ အနားသတ်ထားတယ်…..
ခပ်လှမ်းလှမ်းက ရေကန်ကြီးထဲမှာတော့ ငန်းဖြူ နီနက်တွေကူး ခတ်သွားလာပြီး ကျေးငှက် တွေ ကလည်း ကောင်း ကင်ပြာ နောက်ခံမှာ ပျံဝဲနေတယ်…..
ခပ်ညိုညို တောင် ကုန်းတွေ ရဲ့ထိပ်မှာတော့ ခရမ်းရောင် လာဗင်ဒါနဲ့ ၀ှိုက် အော့ဖ်သည်ဗဲလီ အဖြူရောင် တွေ က အပြိုင် အဆိုင် လုပြီး နေရာယူထားကြတယ် …
ခပ်ပြေပြေ မြင့်တက်သွားတဲ့ တောင် ကုန်းလေးရဲ့ အပေါ်မှာ တော့ ဟောင်းနွမ်းနေပေမယ့် သန့်ရှင်း တည်ကြည် စွာ ထီးတည်းကြီး ကြံ့ကြံ့ ခိုင် ရပ်တည် နေတဲ့ ခရစ်ယာန် ဘုရားကျောင်း ကနေ တနဂ်နွေ ၀တ်ပြုဖို့ အချက်မှန်မှန် တီးခတ် အသိပေါ်နှိုးဆော် လိုက်တဲ့ ဓမ္မ ခေါင်းလောင်းသံ ကို လည်း ကြားနေရတယ်….
ဒါတွေကြောင့် သိပ်လှပါတယ် ဆိုတဲ့ ဘိုမတွေ ကိုလည်း သတိ မထားမိနိုင်တော့ဘူးပေါ့ နော်…
ပုံဖော်ကြည့်လိုက်တာ ရုပ်ရှင်ကားထဲ ရောက်သွားသလိုဖြစ်သွားတယ် … ပန်းနံ့ကလေးတွေတောင် ရသွားတယ် …
သိပ်ကို သာယာတယ်နော် …
အဘဆွေ ရန်ကုန်ကို ပြန်လာရင် တော်တော်စိတ်ညစ်သွားလိမ့်မယ် …
ရန်ကုန်မှာနေရတာ အရမ်းမွမ်းကြပ်တယ် …
အဘဆွေကြီး စာခုမှ ဖတ်မိတော့တယ်..
Nick name ထပ် နာမည်ပြောင် အဘဆွေဆိုပြီး..လူသိပိုများတာ..
ကျနော်လဲ..အင်္ဂလိပ် ဘာသာ စိတ်ဝင်စားပါတယ်..
ဒါပေမဲ့..အစဉ်တစိုက်..မလေ့လာဖြစ်လို့ ..ထမင်းစား ရေသောက်တောင် မကျွမ်းဘူးဖြစ်နေတယ်..
တစ်နေ့ က ကုလားတစ်ယောက် အင်္ဂလိပ်လို လာပြောတာ..ဘာတစ်လုံးမှ နားမလည်ခဲ့ဘူး..
အင်္ဂလိပ်လူမျိုးစစ်စစ် ပြောတာ တစ်လုံးနှစ်လုံး နာလည်ခဲ့သေးတယ်..
အဘဆွေရေ ကျွန်မကတော့ သူများပြောတာ နားလည်တယ်။ ကိုယ်ကတော့ ချက်ချင်း ပြန်မပြောနိုင်ဘူး။ ခဏနေမှ အော်… ဒီလိုလေး ပြောရင်ရရဲ့နဲ့လို့ အမြဲတွေးဖြစ်တယ်။ ငါမလေ့လာလို့ မဖြစ်ဘူးလို့ အမြဲပြောဖြစ်ပေမဲ့ ဒီနေ့ထိ ဒုံရင်း ဒုံရင်းပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ဆက်တိုက်လေ့လာတာမဟုတ်တော့ဘဲ လေ့လာလိုက်နားလိုက်လုပ်နေတော့
အဲ့ဒါကြောင့် မမှီပြောသလိုဘဲ ဒီနေ့ထိဒုံရင်းကဒုံရင်းပါဘဲ
အဘဆွေနဲ့ သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်သွားပြီဗျို့။ English ကိုတော့ အမြဲလေ့လာနေရမဲ့ ဘာသာရပ်အဖြစ်ခံယူထားပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းတော့ အပြောဘက်ကို ပိုပြီး ဌာန်ကရိုဏ်းကျကျ တက်ချင်လို့ သင်တန်းထပ်တက်မလားတောင်စဉ်းစားနေမိတယ်။
ဆူး အခု တလော အင်္ဂလိပ် စာဆို ဖတ်ကို မဖတ်ချင်ဘူး။ ပျင်းပျင်းလာတာ.. အဲဒီ အကျင့်က မကောင်းမှန်း သိပေမဲ့ မလေ့လာပဲ မဖတ်ပဲ နေတော့ မိခင် ဘာသာ စကား မဟုတ်တဲ့ အတွက် သိပြီးသား ရှိပြီးသား အသိပညာတွေက မှိုတက်ကုန်ပြီ။ ခရီးသွားရင်လည်း ဂိုက်တွေက တရုတ်လိုပြောလိုက် အင်္ဂလိပ်လို ပြောလိုက်နဲ့ ဆိုတော့ တရုတ်လို နားမလည်တာ အင်္ဂလိပ်လို သိ.. အင်္ဂလိပ်လို နားမလည်တာ တရုတ်လို သိ အဲဒီလိုနဲ့ လျှောက်သွားနေတာ.. ဘာမှ ရေရေရာရာ ထူးချွန်တာကို မရှိလှဘူး။ ပိုစ် ကနေပြီးတော့ ဆူး မသိသေးတာတွေ အများကြီး သိလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဘိုတွေ လာပြီး ပြောရင်တော့ ဘာမှ သိမှာ ကို မဟုတ်တော့ဘူး။ ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ သင်ထားတဲ့ စာနေလိုမျိုး အစီအငေါ်မတည့် ပြောတယ်လို့ ပြောရမလားပဲ.. ဆူးက စာအုပ်ထဲမှာ သင်တဲ့ အတိုင်းပဲ သိတာ ..ဟိဟိ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အဘဆွေပြောတာ ဟုတ်တယ် .. ကျွန်မတို့လည်း … Good morning လောက် … ပြောတတ်တာကို တော်အီး လျှော်အီး မှတ်နေကြတာ … ဆက်လက်လေ့လာ ဆည်းပူးသင့်တာတွေကို … အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့နေရင်း … နွားခြေရာခွက်ထဲရောက်နေတော့တာပဲ
အဘဆွေရေ ကျေးဇူးပါ။ ကိုယ်ပြောတာကို စကားနားမလည်နိုင်လို့ စိတ်ဓါတ်ကျနေတဲ့သူ ဖြစ်ဖြစ်နေတော့ မပြောတော့ဘူးနေတာ။ အင်္ဂလိပ်စာ အရှည်ကြီးတွေဆိုသိပ်မဖတ်ချင်တော့ဘူး။ အခုတော့ကြိုးစားရင် ရနိုင်မှန်းသိသွားပါပြီ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လဲ အားမငယ်တော့ပါဘူး။ အဘဆွေရဲ့ စာဖတ်ပြီးအားတက်တယ်။ ကျေးဇူး ကမ္ဘာာဆိုင်ရော (ဘယ်လိုတင်ရမှန်းမသိပဲ ကချင်လိုတက်သလို တင်လိုက်တယ်နော်) :thankyou
ကြုံတုံးဒါလေးမေးချင်တယ်..။ကျနော်တို့ ကစာတွေ့ ဘဲသုံးရတော့Grammar
British and American Englishသုံးပုံမသိလို့ မေးချင်နေတာအတော်ဘဲ….။
အမေရိကန်တွေ US ကတချို့ နေရာတွေ မှာ
Simple Past Tense အသုံးပြုတဲ့ အခါ
ဗြိတိန်လူမျိုးGBတွေ က Present Perfect ကို အသုံးပြုကြတယ်..တဲ့ ။
US- He just went home
GB-He’s just gone home.
နောက်တခုသုံးပုံ have ကိုကြည့်ရအောင်
US- Do you haveaproblem?
GB- Have you gotaproblem?
ဖောရင်းကြီးလည်း ခုမှ မြန်မာလိုရိုက်တော့တယ်။
ကိုအောင်ခိုင်ဆွေ ပြောတဲ့ မပီကလာ လျှာတစ်ဝက်နဲ့ ပြောကြတဲ့ အသံထွက်တွေကတော့
အင်္ဂလန်မှာ အင်္ဂလိပ်တွေမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာပြည်မှာလည်း မြန်မာသံတွေကို လေဖြတ်လျှာနဲ့ တီဗွီပေါ်တက် ပြီး ပြောတောင်နေကြပါပြီ။ တစ်ချို့က ပညာမတတ်လို့ စကားသံမပီတာ။
တစ်ချို့က အမြင်ကတ်ချင်စရာကောင်းအောင် ဟန်လုပ်လွန်းတော့ လေသံမပီတာ။
ကျနော့်အထင် ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ် စာမတတ်တဲ့သူ(လူဖျင်းတွေ)နဲ့ သောက်ပိုဟန်လုပ်တွေရှိတော့ ဘာသာစကားတိုင်းမှာ သူ့မိခင်ဘာသာစကားကို မူလ အသံထွက်အစစ်နဲ့ လွဲပြီး စကားပြောနေတဲ့ လူတန်းစားတွေ ရှိနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သို့သော် အတုတော့မယူသင့်ပါကြောင်း။
(စင်းကြွာ၊ ၊ဆီသည်လေးတွေတော့ ချမ်းသာပေးလိုက်ပါ။ )
ပေါက်ဖော်ကြီးရေ ဘလည်းရောက်စက ဘာမှကိုနားမလည်ဘူး နောက်မှ ဟုတ်သွားတာ ကုလားလေသံကတော့
ဒူဘိုင်းမှာ ၇ နှစ်လောက် အတော် ခံလိုက်ရတယ် အခုတော့ နားရည်ဝသွားပြီ။
မှီ့လိုပဲ အမြဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် ရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ပိုဆိုးသေး ဒေါသကထွက် ပြောစရာစာလုံးက ရှာမရ စာစီဖို့ကမေ့ဆိုတော့ ဗမာလိုပဲဆဲ လိုက်ရတယ်…သူ့ဆီကနားထောင် သူများကိုပြန်ပြောတဲ့ ဒီလိုသင်ရတာပဲ။
စုံစုံနဲ့ ရွှေအိလေးတို့ ရေ အမြဲ အင်တခ်ျ ဖြစ်နေတော့ ပိုကောင်းတာပေါ့နော် သိချင်းတွေနားထောင်ပြီး လိုက်ဆို သတင်းကြေငြာတာ နောက်က လိုက်ပြော ကြာတော့လျှာသွက်သွားတာပေါ့ အဖော်ရှိရင်ပိုကောင်းတယ်
ဒီသီချင်းစာသားတွေ သတင်းတွေပဲ စကားပြောတော့ သုံးကြရတာ စကားလူံးတိုးဖို့တော့ စာဖတ် ရင်ရပါပြီ…
ဆူးရေ တစ်ကယ်ပြောတဲ့အခါကြတော့ အဘတို့သင်ထားရတာတွေ နဲ့ မပြောကြတော့ဘူး ဂရမ္မာပဲ ကျန်တယ်
ဥပမာ..have you had your breakfast ?လို့မပြောဘူး finished breakfast ? finished your meal? ဆိုပြီး လေသံမှာ အမေးလေးထည့် လိုက်တာပဲ….
တုံးတုံးရဲ့ အမှန်က ဘတို့တွေ ကိုယ်လိုနေသေးတယ် ဆိုတာသိကြပါတယ် လေ့လာ ရမှာကို ပျင်းတာက ခံနေတော့ ရှေ့မရောက်တာ တစ်ကယ်လို့ ကိုယ့်ဘေးနားမှာ အင်္ဂလိပ်စာအရမ်းကောင်းတဲ့ ပြောနေတဲ့သူရှိနေ ရင် ကိုယ်ပါရောပြီးတော်သွားတယ် မှားနေရင် ချက်ချင်းပြင်ပေးနိုင်တဲ့သူမျိုးပေါ့ နောက် မပြောမဖြစ် အနေအထားရှိရင်လဲပြော နိုင်သွားပါတယ်..
သူရဇော် ရေ အားတက်သွားတယ်ဆိုလို့ ဘရေးကြိုးနပ် ပါတယ် စာရေးမသွက်တော့ ရေးရ အရမ်းပျင်းတာ
ဆက်လုပ်ပါ နောက်ရသွားမှာပါ လုပ်ဖို့သာလိုရင်းနော်
အာလူးပူရီလေး ဘ အမေရိကန်သုံးတော့ မသိပါဘူး ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတော့ ကြားဘူးထားတာဆိုရင် ရွှေအိမ်စည် ပြောတာ ဟုတ်ပါတယ်
အင်္ဂလိပ်က တော့present perfect သိပ်သုံးတာ အမှန်ပဲ
ဘတို့ က မပြီးသေးဘူးဆိုရင် not yet လို့ အပြောများပေမယ့်အင်္ဂလိပ်က not just yet တဲ့
GB- Have you gotaproblem? ဆိုရင် got တောင်မပါတော့ဘူး have you any problem? ဒီလို..
I do not have one ဆို I am not having one လို့သုံးတယ် နောက်မှဘ စာကြောင်းလေးတွေ ရေးဦးမယ်
ကိုလင်းဝေကျော် တော်တော် စာဖတ်စေ့တယ် ဘယ်သူများ ဒီစာကြောင်းကို အင်္ဂလိပ် လိုဘာသာပြန်ပြီး ရီပါ့မလဲလို့ စောင့်နေတာ…အင်္ဂလိပ်စကားပြန် တစ်ယောက်ဈေးထဲမှာ(see the swallow) လို့ အော်မိတာ ဆီသည်တွေ က ငါတို့တော့ အကောက်ကြံခံရပြီ ဆိုပြီး ထွက်ပြေးကြတယ် ဆိုတဲ့ ဟာသလေးပါ..
ကိုလင်းဝေကျော် ပြောသလိုပါ ပဲ ..
” ဘယ်နိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ် စာမတတ်တဲ့သူ(လူဖျင်းတွေ)နဲ့ သောက်ပိုဟန်လုပ်တွေရှိတော့ ဘာသာစကားတိုင်းမှာ သူ့မိခင်ဘာသာစကားကို မူလ အသံထွက်အစစ်နဲ့ လွဲပြီး စကားပြောနေတဲ့ လူတန်းစားတွေ ရှိနေကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ”
ရှိလည်းရှိနေပါတယ် အမေရိကားမှာ လူမည်းတွေ အင်္ဂလန်မှာလည်း သူတို့ တွေနဲ့ ဂျစ်ပဆီတွေ လူငယ်တွေ ပြောကြတယ်…
ဟန်လုပ်တယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်လည်း ရန်ကုန်မှာ ဟော်တယ် လို့ အသံမထွက်ပဲ ဟိုထယ်လ် လို့ ထွက်မိလို့သောက်မြင် ကပ်ခံလိုက်ရဘူးတယ် သူ့ကိုယ်သူ ဘ၀င်မြင့်နေတယ်တဲ့လေ…
US မှာနေထိုင်သောတရုတ်လင်မယားနှစ်ယောက်သည်၊တနေ့တွင်ကား accident ဖြစ်သွားသည်၊ကားသည်လမ်းဘေးတိုင်နှင့်တိုက်မိ၍ယေကျာ်း၏ခြေတောက်သည်ကားထဲတွင်ညှပ်မိကာအပြင်ထွက်မရ၊ဘေးမှာရှိတဲ့မိန်းမကတော့ဘာမှမဖြစ်သော်လည်းအရမ်းလှန့်သွားသည်၊ 199 ကိုခေါ်ဖို့အဲဒီတုံးက hand phone လည်းမပေါ်သေး၊ခက်တာကအရေးထဲအဲဒီတရုတ်မ၊ကဗိုလ်လိုသိပ်မပြောတတ်၊ဗိုလ်လိုပြောတတ်တဲ့ယေကျာ်းကမလှုပ်နိုင်၊မတတ်နိုင်တော့မိန်းမလည်းဘာဖြစ်ဖြစ်အနီးနားရှိဗိုလ်အိမ်ကိုအကူညီတောင်းရတော့တာပေါ့၊တံခါးဖွင့်၍ထွက်လာတဲ့ဗိုလ်ကိုတရုတ်မကြီးကခေါင်ညွတ်ကာအရိုအသေပေးပြီးဘယ်ဘက်လက်ကိုညာဘက်ညိုးပြီး “ one car come ” ညာဘက်လက်ကိုဘယ်ဘက်ညိုးပြီး “ one car go ” ပြီးလက်နှစ်ဖက်ကိုရိုက်လိုက်ပြီး “ two car ban ! ban ! ban ! ” ၊ညာဘက်လက်ကိုလက်သီးဆုပ်၍လက်မနှင့်လက်သန်းကိုထောင်ကာနားရွက်နားကိုကပ်၍ “ please အွမ်အီ~~~အွမ်အီ~~~အွမ်အီ~~~” လို့ပြောပြလိုက်သည်၊ဗိုလ်သည်လည်းချက်ချင်းသဘောပေါက်ပြီး 199 နှင့်ambulance ကိုခေါ်ပေးလိုက်ပါသည်၊အရေးပေါ်အရေးကြီးရင်အဲဒီ Sino-Englishလည်းသုံးလို့ကောင်းကြောင်းတင်ပြအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
ဒီနှစ်.. နျူးရဲရစလူရှင်းက တစ်နေ့ကို အင်းဂလိရ်ှဘိုင်ဘာ တစ်မျက်နှာဖတ်မယ်ဆိုတာပဲ.. ဒါပေမယ့် အခု မြန်မာနှစ်ကူးတောင်ရောက်တော့မှာပေါ့… :(( စာအုပ်တောင်မရှာရသေးဘူး..နာက်မကျသေးပါဘူးလေ.. မြန်မာနှစ်ကူးမှစလိုက်မယ်…
ကရင် နှစ်ကူးမှ စရင် ပိုကောင်းမားးးးး
ဖတ်၇တာ ဗဟုသုတ ရတယ်ဗျာ..
ဒီမှာ လဲ နော်ဝေဂျင်တွေဆိုပေမယ့် လေယူလေသိမ်းတွေ အသုံးအနှုန်းတွေက တော်တော်ကွဲလွဲကြပါတယ်..
နည်းနည်းမှားတာနဲ့ရွာလည်တော့တာပါဘဲ..
ကျနော် ဘဏ်ကို သွားချင်တယ် လို့ပြောမယ်ဆိုရင်
ဲJeg vil go til banken….* စာစကား…
တစ်ကယ်ပြောတော့ go ကို ဖျောက်ထားပါတယ်..
ကျနော်က ဘဏ်ကို ဘန့် ကဲန် လို့ထွက်ရမှာကို…
Jeg vil til banker ယိုင်း ဗီးလ် ထေးလ် ဘန့် ကဲရ် လို့ပြောလိုက်တော့
မန်နေဂျာက …Til meg ထေးလ် မိုင်း ( ငါ့ကိုလား )လို့ပြန်မေးတယ်..ကိုယ်ကလဲံ သူ့ ကို အကြောင်းကြားခွင့်တိုင်တာဆိုတော့
JA…လို့ထပ်ပြောလိုက်တာပေါ့..
သူက မျက်နှာတွေနီပြီး…. Zaw, Det er ikke bra ဇော် ဒဲ အာ အီကဲ ဘရာ့
ဇော် အဲဒါတော့ မကောင်းဘူးပေါ့…
ကိုယ်ကလဲ ဘဏ်မှာ ပိုက်ဆံပေးရမှာဘဲ တွေးပြီး
ဲJo….det er veldig bra… ယွူ ဒဲ အာရ် ဗယ့်လ်ဒိဘရာ့ အဲဒါကောင်းပါတယ်လို့ထပ်ပြောတော့ …
ဘေးလူပါ ခေါ်ရှင်းမှ အားနာလိုက်တာဗျာ
ဘန့် ကင်းန်…. နဲ့….ဘန့် ကဲရ် နည်းနည်းလေးလွဲတာ..
ကျနော် မန်နေဂျာကို ပြောလိုက်တာက
“ ငါ မင်းကို ကန် ချင်တယ်” ဖြစ်နေတာဗျ…
လေယူလေသိမ်းကတော့ နော်ဝေ စကားလဲ မလွယ်ဘူး….
ဦးခေါင်ကရီရတယ်…ပြီးခဲ့တဲ့ပရောဂျက်က ဒီပီ ဆော့ဝဲလ် အင်ယာလေးက နော်ဝေးဂျင်းလေး..သူအင်းဂလိရ်ှလိုပြောရင်ငေးကြည့်ရလောက်အောင်ကြည်နေတာပဲ. အခုထိနားမလည်တာက အင်းဂလိရ်ှတွေ ပြောတာရယ်. အမေရိကန်တွေ ပြောတာရယ်. Perth သြဇီသားပြောတာရယ်..မီတင်မှာသူတို့ မေးမှာကိုအရမ်းကြောက်တာ.အင်းဂလိရ်ှတွေပြောတာအရမ်းမြန်ပြီး. အမေရိကန်တွေက စကားလုံးအဆန်းတွေ သိပ်သုံးသလိုပဲ။